Archive du 20200409
Andry Rajoelina “Eto amintsika ny fanafodin’ny Coronavirus…”
Azo atao ny manova ny tantaran’ny firenena sy izao tontolo izao. Nisy fotoana aho niasa andro aman’alina. Raha be indrindra dia adin’ny 4 no matory.
Hetsika Rohy “Tsy ekena ny fanagadrana mpanao gazety »
Ny Hetsiky ny Firaisamonim-pirenena ROHY dia maneho etoana ny tsy fankasitrahany manoloana ny fitazonana amponja an-dRamatoa Rahelisoa Arphine,
Mpanao gazety Arphine Helisoa Naverin’ny fitsarana any am-ponja
Taorian’ny fampakarana ny raharaha sy ny fangatahana famotsorana vonjimaika ny mpanao gazety,
Vaka ihany ny saina
Mivahavaha ny fiheritreretana manoloana ny zava-mitranga rehetra.
Minisitry ny fahasalamana Nijery ifotony ny fanofanana ireo biôlojista
Nidina ifotony nijery sy nanadihady ny fomba fiasa eny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ny Minisitry ny fahasalamana, Pr Ahmad Ahmad, omaly maraina.
Olana ara-toekarena Nanome toky fanjakana fa hanohana ny sehatra tsy miankina
Hiara-hiasa akaiky ary hifanampy sy hifameno ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana hanavotana ny toekarena izay mitotongana hatrany noho ny fisian’ny valanaretina Corona virus.
Ministeran’ny fanabeazana Sady mampianatra no mampialavoly
Miaina anaty fialan-tsasatra tsy fidiny vokatry ny coronavirus ankehitriny ny mpianatra manerana ny Nosy, tahaka ny ankizy 1,2 miliara maneran-tany.
Kaominina Antananarivo renivohitra Hanomboka ny asa fanamboaran-dalana
Araka ny fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina dia hisy ny asa fanamboaran-dalana hatao amin'izao fotoanan'ny fihibohana tsy hahafahan'ny fiara mifamezivezy izao.
Fahasosorana anaty fiarahamonina Miroborobo firehitra toy ny afon-jozoro
Faritra maro no mbola tsy misitraka ny fanomezana atolotry ny fanjakana na ilay teo aloha na ny rafitra loharano ankehitriny.
Analamanga, Antsinanana, Matsiatra Ambony Hisy fanisam-bahoaka, homena tohana manokana
Ny zava-dehibe hataontsika, izay nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena dia ny resaka “digitalisation” eny amin’ny fokontany, hoy ny Filoha.
Vaky vava ingahy Filoha Tena sarotra alamina ny Malagasy
Ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina ankehitriny dia 93. Ny mahafaly dia ny hoe na mitombo aza ny voa, dia 11 no sitrana.
Olona manana fahasembanana Hozaraina vatsy ihany koa
Tsy dia voaresaka loatra ireo olona manana fahasembanana ao anatin'izao hamehana ara-pahasalamana izao, ankoatra ireo zokiolona.
Fodiana any amin’ny faritra Takibrosy 90 ireo nivoaka tetsy Androndrakely
Nahatratra 90 isa omaly ireo taksibrosy niazo ny faritany nivoaka tetsy Androndrakely, toerana vonjy maika namindrana ireo koperativa miisa 24 miazo an'i Fianarantsoa sy Toliara raha 120 isa afak'omaly.
Pr Zely Andriamanantany “Aleo mitandrina fa tena sarotra tsaboina ny coronavirus”
Rehefa miady amin’ny aretina iray, dia mila fantarina voalohany ny fomba fipariahany. Io dia virus, izay tsy misy fanafany manokana.
Didier Ratsiraka Nanolotra vola 3,6 tapitrisa ariary
Nanolotra vola mitentina 1,2 tapitrisa ariary ho an` ireo mpitandro filaminana misahana ny ady amin` ny COVIDD-19 ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka.
Tsy fanajana ny làlana sy fepetra Nampitandrina ny ben’ny tànanan’Antananarivo
Mampahatsiahy ireo fepetra mila tohizana sy hajaina ao anatin’ny 15 andro hisian’ny fihibohana ny Ben’ny tanàn’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina.
Sabotsy Namehana Tsy maintsy manao arovava avokoa izay mivoaka
Tsy mety voafehy ny ankamaroan'ny olona manoloana ny fihanaky ny tsimok'aretina coronavirus.